Gaas Oo U Gulfinaya Soo Celinta Dhul Ay Maamulaan Somaliland & Khaatumo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa doonay in maamulka Puntland soo ceshado dhul ay maamulaan Somalilnad iyo Khatumo.
C/wali Maxamed Cali Gaas, ayaa ka dhawaajiyay in aysan dhici doonin Midnimo dhamaystiran oo ay helaan reer Puntland ilaa iyo inta Puntland ay dib usoo ceshanayso dhulka ka maqan ee Somaliland iyo Khaatumo kala maamulaan.
Gaas ayaa tilmaamay iney lagama maarmaan tahay in la qabto shirweyne looga hadlayo sidii loo soo celin midnimada deegaanada Puntland.
“Waxaa muhiim ah in aan ka shaqeyno sidii aan iskusoo celino dadkii Puntland wada aas-aastay, waxaa laga maarman ah in aan qabano Shirweyne looga hadlaayo midnimada Puntland’’, ayuu yiri Gaas.
“Waxaa kaloo lagu gaari karaa midnimada soo celinta dhulka Puntland ee ka baxay gacan ku haynta Dowladda, ma dhacayso midnimo dhamaystiran iyadoo aan dhulka oo dhan gacanta ugu jirin Dowladda’’, ayuu sidoo kale yiri Gaas.
Gaas ayaa xilligii uu u tartamayey madaxweynaha Puntland arrintaas kusoo daray ololihiisa siyaasadeed, wuxuuna durba ka dhawaajiyey inuu qorshahaas ku dhaqaaqayo.
Puntland iyo Somaliland ayaa muddo dheer ku muransanaa gobollada Sool iyo Sanaad iyo degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer, waxaana muranka gadaal kaga soo biiray maamul la magac baxay Khaatmuo State oo qabsaday qeybo ka mid ah dhulka muranku ka jiro sida Taleex iyo Buuhoodle.
Dadka ku nool gobollada lagu muransanyahay ayaa feker ahaan ah kuwo kala taabacsan Somaliland, Puntland iyo Khaatumo, taasoo arrin culus ka dhigeysa iney meel isku raacaan.